ZOOM : AMBOHIMAHASOA - TVMADA - RADIOMADA
TVMADA - RADIOMADA > FOIRES & SALONS > ZOOM :
Raha vao mandeha ho any amin’ny faritra atsimo iny, na ho any Fianarantsoa, na ho any Mananjary na Manakara, na Farafangana, ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’ny Nosy rehetra iny, dia tsy maintsy mandalo an’Ambohimahasoa. Distrika iray ao anatin’ny faritra Haute Matsiatra ny distrika an’Ambohimahasoa.
Kaominina 18 no mameno azy ary fokontany maro dia maro no hita ao. Raha ara jeografia dia 80Km mialohan’ny hidirana an’i Fianarantsoa no misy an’Ambohimahasoa. Izany hoe distrika latsaka afivoany tokoa izy amin’iny lalam-pirenena faha fito iny ka mety hieritreritra ny sasany fa somary tsy dia mandroso ity distrika ity. Mifanohitra tanteraka amin’izany anefa ny zava misy satria dia tena tanana lehibe tokoa raha Ambohimahasoa.
Distrika misy jiro sy rano tsara, tsy misy delestazy izany mihitsy, distrika misy ireo banky rehetra ilaina na BFV, na BOA, na BNI,sns…distrika manan-karena dia tena manan-karena tokoa satria avy ao no misy ny fototra mangahazo iray izay milanja 20 kilao mahery. Na dia tsy mbola manana ny toeram-pandidiana aza ny hopitaly ato amin’ny distrika an’Ambohimahasoa dia afaka mitsabo ara dalàna izy ireo. Ny voka boasary dia tsy ampoizina mihitsy satria dia mamokatra voasary “Orange” amin’ny taonina ny distrika an’Ambohimahasoa.
Ny faha 23,24,25 Jiona 2017 lasa teo no nanatanterahana ny foaram-bokatra lehibe teto amin’ny distrika an’Ambohimahasoa izay nampitondraina ny lohahevitra hoe “Foara tsy ahin’ny ela, fanohitra ho amin’ny fampandrosoana”. Fotoana izay nahafahan’ireo kaominina rehetra ato anatin’ny distrika an’Ambohimahasoa nitondra ireo vokatra nisy avy any aminy. Ankoatra ny vary, ny mangahazo, ny voasary, dia tao ny omby mifaha izay tena lehibe dia lehibe tokoa, ny siramamy gasy izay mora dia mora noho ity faritra ity tena mamboly fary, fa anisan’ny tena nanaitra dia ny fampisehoana ireo fomba betsileo ka tao ny Sokela izay karazana kabary hifamaliana eo amin-drizareo Betsileo, ny Dihy Betsileo izay Dombolo no iantsoana azy, ny firandrana Betsileo, ny fitafy betsileo, nty vakodrazana Betsileo. Maro dia maro ireo fomba amam-panao Betsileo no naseho tato anatin’ity Foara tsiahin’ny ela ity ka nahaliana olona maro tokoa izy ity.
Tonga nanotrona ity foara “tsy ahin’ny ela” ity moa ny minisitry ny fikarohana ara tsiansa sy ny fampianarana ambony izay zanaky ny kaominina Sahave, kaominina iray ao anatin’ny Distrika an’Ambohimahasoa. Anisan’ny tena olana lehibe sy goavana indrindra moa ny resaka tsy fandriampahalemana ato anatin’ny Distrika an’Ambohimahasoa satria dia isan’andro dia misy fanafian-jiolahy ary isan’andro dia misy fanakanan-dalana foana hataon’ireo malaso amin’ity lalam-pirenena fahafito ity ary ato anatin’ny distrika an’Ambohimahasoa no misy izany fanakanan-dalana izany ka miantso ireo olom-panjakana ambony ireo olona ato anatin’ny Distrika an’Ambohimahasoa mba hijery akaiky izany tsy fandriam-pahalemana izany satria tsy misy fampandrosoana vanona raha misy tsy fandriam-pahalemana.